STP Forex Broker - Forex Central Kuchenesa Kambani (FXCC)
Tarisa vhidhiyo yakazara
Mushanduri wako haabatsiri HTML5 video.
FXCC yakavakwa muC2010 neboka revatengi vemarike yekunze kune dzimwe nyika, vachivaka pavakareba kwenguva refu mumisika yemari, vakaedza kuita sangano rinoenderana nehupamhi hwemitemo yavanoda sevatengi. Iyo kambani inowanikwa neboka rakazvitsaurira revashandi vane ruzivo rwakawanda mumashandisi emari.
Kupa iyo yakanyanya customer centric proposition munharaunda. Takazvipira kune kubudirira kwevatengi vedu, nekuendesa mari yekukwikwidzana, kuburikidza nehutano hwakanaka uye hwakajeka hwekutengeserana mumisika yekutengeserana yekutengeserana. Chinangwa chikuru cheFXCC ndechokumanikidza vashandi vayo nezvose zvishandiso zvavanoda, kukudziridza unyanzvi hwavo, nepo vachifarira unyanzvi hwekutengesa usina kufanirwa, panguva imwe neimwe yerwendo rwavo.
Kuvimbika, Kuparara uye Zvakanaka
FXCC's ECN / STP muenzaniso inopa vadzidzisi, vatengesi vanoshingaira, hedge fund mameneja uye makambani makambani nekutambira kwechokwadi chaiyo kushambadzira uye kukwikwidzana kwezvinhu zvakananga kubva pakutungamirira vatengi vepa multibank liquidity.
Muenzaniso we ECN / STP unopa FXCC vashandi rusununguko rwokutengeserana pane imwe nhamba yekutamba munda. FXCC yakashanda zvakaoma mukuita nyika yePresx yakajeka zvikuru pamwe nehukuru hwakakura hwevatengesi.
Bhuku rakarondedzerwa rebhizimisi rinobva pakushandisa Straight Through Processing (STP), apo mirairo yose yeFXCC yevateresi inotumirwa kune kukwikwidzana uye yakagadzikana Financial Institutions, kubvisa kukwanisa kweiyo ipi zvayo yemari, kana kupesana kwezvido pakati pevatengi vayo.
FXCC's 'No Dealing Desk' kutevedza muenzaniso inouya pasina mutengesi wekupindira uye hapana re-quotes zvakare. Vatengesi vevatengi vanoitwa pamitengo inopiwa kuFXCC nevanopa vapeji. The Price Aggregator inotsvaga izvozvi vatengesi vanovimbiswa kuti vanongotanga kuwana mikana yakawanda yeBhidhiyo / Bhizimisi yekutengesa, kutarisira kuti mirairo yose inourawa nenzira yakakwikwidza uye yakajeka.
Sei Uchifanira Kuisa Pakati Paunokwanisa
Zvakaitika uye Zvakasimbiswa
Kune Vatengesi kubva kune 2010, kutevera nzira dzakanakisisa uye nzira dzekutarisana nezvamunotarisira
Kuva nehupamhi hwechiitiko uye ruzivo, isu tinonyatsosungirwa kuti tinzwisise zvinodiwa nevatengi vedu uye kutsigira vatengesi pakuzadzisa vavariro dzavo uye vavariro dzekutsvaga. Nokupa imwe nzvimbo yakasiyana-siyana yezviwanikwa, VIP yehutano hwemashumiro, pamwe chete nenyika-class support 24 / 5, nzvimbo yedu shoma yokutengeserana mamiriro ezvinhu inopa nzvimbo yakanaka yekubudirira.
Ichokwadi STP Kuitwa
Kuvimbisa kuti mirairo yose inourawa nenzira yakakwikwidzana uye yakajeka
Inonyanya kugadzirisa kuderedza mari yako yekutengesa kusvika zero uye kuwedzera zvigadzirwa zvako zvekutengesa
Takazvipira kune kubudirira kwevatengi vedu, nekuendesa mari yekukwikwidzana, kuburikidza nehutano hwakanaka uye hwakajeka hwekutengeserana mumisika yekutengeserana yekutengeserana. ECN XL, inozivikanwawo sekuti ZERO account ndeimwe yemakambani anotengesa mari yakawanda.
Kurongeka Kwemamiriro Akarere
Company Investment yakanyoreswa
muRepublic of Vanuatu
nenhamba yekunyoresa 14576.
Akabvumirwa uye anorongedzwa neCyCC
seCyprus Investment Firm (CIF)
neIndesheni Number 121 / 10.
Ona yose Uhutano uye Kubhadhara
Vatengesi '#1 Kusarudza
Votevedzwa nevatengesi nevashambadzi vezvikwata
Zero Dhipatimendi Mari
TARISA LIVE ACCOUNT * Mitemo nemitemo inoshanda
CENTRAL CLEARING Ltd inyoresa pasi pe International International Act [CAP 222] yeRepublic of Vanuatu neNyoreji yeNhamba 14576. Iyo inobvumirwa neVanuatu Financial Services Commission (VFSC) seyo mutemo wekutarisira mari yepamutemo uye inobvumira kuita bhizinesi rekuita mune zvigumisiro pasi peVatengesi muChishanu (Licensing) Act [CAP 70].
FX CENTRAL CLEARING Ltd inyoresa pasi peCyprus Company Law nekunyora Nhamba HE 258741. Inogamuchirwa uye inotungamirirwa seCyprus Investment Firm (CIF) neCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), pasi peInvestment Services and Activities uye Mutemo Wemutemo Wakaitwa 2007 (Mutemo 144 (I) / 2007), uye zvichienderana neCSC Mitemo. Nhamba yeCyseC yeRisense yeRisense yeFX CENTRAL CLEARING Ltd i121 / 10.
Iso reLisense yeZveruzivo.
Kugamuchira uye kutumirwa kwemirairo maererano neyimwe kana kupfuura Zvikwereti Zvemari.
Kuitwa kwemirairo panzvimbo yevatengi.